Fika 4 hahazoana ny ankamaroan'ny Google Keep | Androidsis
Eder Ferreno | | Fampiharana Android, Android cheat, Tutorials
Betsaka ny olona mampiasa ny findainy hanoratra zavatra mandritra ny andro. Na fampahatsiahivana izany, hevitra efa nananantsika na lalana iray. Manana rindranasa marobe ao amin'ity sokajy ity izahay. Na dia misy safidy mety ho an'ny mpampiasa Android aza. Google Keep ity fampiharana ity. Misongadina izy amin'ny maha-mora ampiasaina azy, ary koa ny fampidirana azy tanteraka amin'ny telefaoninao.
Google Keep dia fampiharana efa hatry ny ela. Na izany aza, nitombo hatrany ny lanjan'izany. Nisy koa natolotra Fampiasana fanampiny izay mahavita azy tanteraka. Ireto misy torohevitra vitsivitsy.
Noho ireo fikafika ireo dia afaka mivoaka bebe kokoa amin'ny fampiharana ianao. Amin'izany fomba izany dia ho lasa fampiharana ilaina isan'andro ianao isan'andro. Na mpampiasa tsy tapaka ny Google Keep ianao na mieritreritra hampiasa azy io, azo antoka fa hahasoa anao ireo fikafika ireo.
1 Mamorona lisitra
2 Mizara naoty
3 Manampia fampahatsiahivana
4 Freehand Notes
Izy io dia iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra amin'ny fampiharana. Inona koa, manome antsika ny mety hanisy marika ireo singa amin'ilay lisitra, ankoatry ny fahafahany manary azy ireo ihany koa. Raha te-hamorona iray isika dia tsy maintsy mifidy rakitra vaovao ao amin'ilay fampiharana dia ampidiro ny laharana 1 ary mampiditra izay tiana soratana ao amin'io tsanganana io izahay. Tsindrio ny fidirana ary hamboarina ho azy ny isa manaraka. Araka ny hitanao, ny famoronana lisitra dia tena tsotra sy haingana.
Izy io dia endri-javatra vitsivitsy izay fantatry ny mpampiasa Google Keep. Saingy tena ilaina tokoa izany. Afaka mizara naoty amin'ny fampiharana amin'ny fomba tsotra izahay. Ao amin'ny ankavanan'ny farany ambany dia ahitantsika sary famantarana telo (toy ny ellipsis telo izy ireo). Tsindrio ity kisary ity ary mahazo safidy antsoina hoe «mpiara-miasa» izahay. Safidintsika io safidy io izao dia angataho izahay hiditra ny mailaky ny olona izay tianay hizarana ity naoty ity. Amin'izany fomba izany no ahafahan'ilay olona niarahanay nanoratra ilay naoty. Na dia ilaina aza ity olona ity apetraho koa ny fampiharana amin'ny findainao hahazoana fidirana.
Io no iray amin'ireo tetika mahasoa indrindra rehefa mampiasa ilay fampiharana isika. Google Keep dia manome antsika fahafahana mampiditra fampahatsiahivana ao anaty naoty. Ny zavatra tsara indrindra dia ny olana na ny karazana naoty na ny atiny. Afaka mamorona ireny fampahatsiahivana ireny foana isika. Ao amin'ny menio eo amin'ny ilany havia no ahazoantsika ny safidy fampahatsiahivana. Amin'ny fipihana eo io dia hahazo izany isika andao hifidy ny naoty izay hanampianay ity fampandrenesana ity. Ka zavatra tsotra io ary hanampy antsika tsy hanadino ireo asa na fanendrena lehibe.
Azontsika atao ihany koa ny mandeha any amin'ny ilany havia ambany amin'ny rindrambaiko ary tsindrio ny marika +. Rehefa manao an'io isika dia mahazo safidy antsoina hoe add fampahatsiahivana. Rehefa manao an'io isika dia omen'ny fampiharana ny fahafaha-manao ampio ny fanairana ary raha mila fanamarihana feo koa izahay miaraka amin'ny fampahalalana momba ilay asa tokony hatao na famantarana fanampiny. Mety ho iray amin'ireo fiasa mahasoa indrindra ao amin'ny Google Keep.
Raha tsy maintsy manoratra naoty lava be ianao na tsy te-hanoratra ny zava-drehetra dia mamela anao hampiasa izany ny fampiharana fomba fanoratra freehand. Midika izany fa afaka manoratra toy ny mampiasa solafafa eo amin'ny efijery finday isika. Safidy tena mahaliana izay omen'ny Google Keep anay, na dia toa tsy betsaka aza ny mpampiasa mahalala azy.
Ny fampiasana an'io safidy io dia tena tsotra. Satria mila manoratra fanamarihana vaovao fotsiny isika. Ary amin'ny ampahany ambony dia ahitantsika sary masina miendrika penina. Tsindrio ilay kisary voalaza ary efa ampiasainay ny maody freehand. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika manoratra na manao sary izay tiantsika eo amin'ny efijery.
Manantena izahay fa ireo tetika ireo dia nahasoa rehefa nampiasa ny Google Keep. Azonao atao ny misintona ny fampiharana etsy ambany. Maimaimpoana tanteraka izany ary tsy misy doka na fividianana karazana ao anatiny.
Google Keep: naoty sy lisitra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Araraoty tsara ny Google Keep amin'ireo tetika ireo
Gines Delgado Cejudo dia hoy izy:
Ahoana no ahafahan'izy ireo mametraka doka amin'ny pejy rehetra manakana anao tsy hahita ny atiny?
Valiny tamin'i Ginés Delgado Cejudo